Mpanamboatra kojakoja elektrika tsy misy fipoahana - Shina Mpanamboatra fitaovana elektrika tsy misy fipoahana.
BQC53 andian-dahatsoratra fipoahana-porofo electromagnetic starter
5. Azo ampiharina amin'ny vondrona mari-pana dia T1 ~ T4 / T5 / T6;
6. Azo ampiasaina amin'ny fanombohana lavitra na fanaraha-maso mivantana ny fanombohana, mijanona ary mandroso ary mivadika amin'ny maotera cage squirrel telo-dingana, ary afaka miaro ny enta-mavesatra be loatra, eo ambanin'ny voltase, ny fihodinana fohy ary ny tsy fahombiazan'ny dingana.Tokony hisy koa ny fitsinjarana herinaratra mialoha ny ambaratonga sy ny fiarovana mandritra ny fametrahana.
BF 2 8158-g andian-dahatsoratra Explosioncorrosion-porofo fandidiana poste
5. Azo ampiharina amin'ny entona manimba, hamandoana ary toerana fitakiana fiarovana avo;
6. Mihatra amin'ny vondrona mari-pana dia T1 ~ T4;
LBZ-10S andian-dahatsoratra amin'ny fipoahana-porofo fandidiana post
6. Ampiasaina amin'ny rafitra fanaraha-maso elektrika, toy ny fandefasana baiko sy fanaraha-maso ny sata ihany.
LBZ-10 andian-dahatsoratra amin'ny fipoahana-porofo fandidiana post
andian-dahatsoratra tsy mipoaka ny switch
6. Manova famantarana mekanika ho famantarana elektrika ao amin'ny faritra fanaraha-maso ho fanaraha-maso ny hetsika mekanika na fomba fiasa.
dLXK andian-tsarimihetsika tsy mipoaka
SW-10 andian-dahatsoratra Mipoaka-porofo jiro switch
6. Toy ny fanaraha-maso ny jiro fixtures na fitaovana elektrika kely, rehefa apetraka Tokony hisy fiarovana mialoha ambaratonga.
BF 2 8158-g andian-dahatsoratra Explosioncorrosion-porofo boaty fanaraha-maso
6. Azo ampiharina amin'ny vondrona mari-pana dia T1 ~ T6;
Boaty fanaraha-maso tsy misy fipoahana BXK58
6. Ampiasaina amin'ny rafitra fanaraha-maso elektrika ho an'ny fandefasana baiko sy fanaraha-maso ny sata.
PBb andian-dahatsoratra Positive tsindry fipoahana-porofo fizarana board
6. Ho an'ny fizarana herinaratra amin'ny jiro na tariby herinaratra, fanaraha-maso ny fitaovana elektrika;koa ho toy ny foibe fanodinana famantarana sy rafitra fanaraha-maso foibe.
BF 2 8159-gQ andiany Explosionerosion-porofo electromagnetic starter
7. Mifehy ny fanombohana mivantana, mijanona sy mandroso ary mivadika amin'ny motera, ary ny enta-mavesatra, Short circuit ary eo ambanin'ny fiarovan-tena.
BPG andiany fanaparitahana tsy misy fipoahana
6. Ho an'ny fizarana jiro na tariby herinaratra, fitaovana elektrika on-off fanaraha-maso na fitsirihana sy fikojakojana.